Tari-dia: Toro-hevitra SEO ho an’ireo bilaogera mpanandra-teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2019 5:52 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Avrily 2010)
Ny Global Voices Advocacy dia faly amin'ny famoahana ny andiany faha-telo amin'ny Toro-lalana Advocacy 2.0: toro-hevitra SEO ho an'ireo bilaogera Advocacy : Ahoana no fampiharana ny fanatsarana amin'ny milina fikarohana ny fampitomboana ny isan'ny mpamaky anao sy hisarihana olona bebe kokoa. Nosoratan'ny namako sady mpiara-miasa amiko, The Sudanese Thinker, mpanoratra ato amin'ny Global Voices, mpanolo-tsaina momba ny haivarotra antserasera sy ny fihariana antserasera manana fifantohana amin'ny SEO sy amin'ny endrika fitantanana antserasera manokana an-tarehimarika fito,
Ny tanjon'ny tari-dalana dia ny manazava hoe inona no atao hoe fanatsarana amin'ny milim-pikarohana, ny maha-zava-dehibe azy sy ny fomba ahafahan'ny bilaogera mpanandra-teny mampiasa azy mba hampitombo ny fifamoivoizana sy ny mpamaky azy ireo ary hisarihana ny hevitr'ireo mpikaroka. “Ity toro-lalana ity dia tsy tokony horaisina ho fomba feno amin'ny SEO. Voasoratra amin'ny fomba tena tsotra izy io, ka na ny tsy teknisiana aza dia mahita izany fa mora harahana sy hahazo tombontsoa amin'izany:”
Increase their traffic and readership
Influence the opinions of searchers
Bilaogera mpanandrateny tsy tambo isaina manerana izao tontolo izao no mibilaogy amin'ny fony isan'andro, satria te-ho henoina sy maniry hamorona fiantraikany tsara izy ireo.
Na izany aza, ny zava-misy dia mety ho traikefa mahaketraka izany ho an'ny maro amintsika, .
Raha ny tena izy, dia vitsy ny mpamaky ny ankamaroan'ny bilaogy tsirairay. Manoratra sy mamoaka ianao, saingy tsy misy olona mamaky izay tokony holazainao.
Zara raha misy olona maneho hevitra.
Ny vaovao tsara dia tsy ilaina ho mahakivy ny bilaogera izany toe-javatra izany.
Eto no misy ny torolàlana azonao vakiana. Ny tanjona dia ny manazava ny atao hoe fanatsarana amin'ny milina fikarohana, ny maha-zava-dehibe azy ary ny fomba ahafahan'ny bilaogera mpanandrateny mampiasa azy mba:
1.Hampitombo ny fifamoivoizana sy ny mpamaky
2.Hitarika ny hevitry ny mpikaroka
Noho izany, raha bilaogera mpanandrateny ianao na te-ho iray amin'izany, dia fatory ny fehikibo fiarovanao ary miomàna, satria eo an-dalam-pahafantarana ny fikafika tsotra momba ny SEO ianao.
Famintinana ny toro-lalana
Inona no atao hoe SEO?
Dingana #1 – Fantaro ny lohahevitry ny bilaoginao ho an'ny SEO
Dingana #2 – Fikarohana sy fisafidianana teny lehibe
Dingana #3 – Mampiasa teny lehibe ifotorana amin'ny bilaoginao
Dingana #4 – Manangana rohy ho an'ny bilaoginao avy amin'ny tranonkala hafa
Step #1 – Determine Your Blog’s Topics for SEO
Step #2 – Keyword Research and Selection
Step #3 – Using Keywords In Your Blog
Step #4 – Building Links to Your Blog from Other Sites
SEO Tips for Advocacy Bloggers dia azo trohana amin'ny endrika PDF. Mety mila mametraka Adobe Acrobat Reader maimaim-poana ianao raha hijery izany.
Trohy ny toro-lalana SEO Tips for Advocacy Bloggers ary ampio izahay handika izany amin'ny fiteninao.